Dowlada Hinda oo hakisay dhoofinta talaalka Covid_19 - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dowlada Hinda oo hakisay dhoofinta talaalka Covid_19
Dowlada Hinda oo hakisay dhoofinta talaalka Covid_19
India ayaa hakisay dhoofinta Talaalka Coronavirus ee Oxford AstraZeneca, Talaabadan ayaa lagu micneeyay in dalab badan oo talaalka ah uu ka jiro gudaha wadankaas, Kaasoo isa soo tarayay todobaadyadii u dambeeysay.
Waxaa aad ukorodhahay tirada dadka uuso ritay cudurka waxaana la diiwaangaliyay 47,000 kiis halka 275 dhimasho ah la soo wariyay. Saraakiisha katirsan Wasaarada arrimaha dibada ayaa sheegay in ilaa bisha April uusocon doono hakinta dhoofinta talaalka Covid-19.
Qiyaas lasameeyay saameenta uu yeelanayo joojinta dhoofinta talaalka ayaa lagu ogaaday In ka badan 190 wadan ayaa oo ku jira hindisaha Covax ee WHO ay saameen doonto goaanka New Delhi. Machadka ugu weyn India ee soo saara Talaalka ee Serum ayaa sheegay in uu dib u dhigay shixnad talaalka Oxford AstraZeneca ah oo lageyn lahaa dalalka UK, Sacuudi Carabiya, Morocco iyo Brazil.
India ayaa in ka badan 60 milyan oo kuuro oo talaal ah u dhoofisay 76 dal, talaalkaas oo u badnaa Oxford AstraZeneca. Machadka Serum ayaa sheegay in uu soo saari doono hal bilyan oo kuuro ah oo talaal ah sanadkan, kuwaas oo la siin doono dalalka dhaqaalahooda meel dhexaadka yahay iyo kuwa hooseeyo.
Waxaa uu intaas ku daray in ilaa bishiis Janaayo uu soo saaray inta u dhexeysa 60 ilaa 70 milyan oo kuuro oo talaal ah bishii. Sida uu hadda qorshuhu yahay machadka wuxu soo saaro doonaa todobada bilood ee soo aadan 600 oo milyan oo kuuro halka bishii uu qorsheeyay 85 milyan uu soo saaro.